Ababhalisi bafuna i-Apple TV +. Isicwangciso esitsha kukunyusa inani leefilimu | Ndisuka mac
Ukusasazwa kwenkonzo yemultimedia ye-Apple ayisiyiyo eyabo banababhalisi abaninzi okanye abalandeli. Leyo yinyaniso engenakuphendulwa. Nangona kunjalo, iApple ayilunikezeli olo tshintsho kunye nokujika kweedigri eziyi-180. Ngale nto nangokolwazi lwamva nje olifunayo Yandisa inani leemiboniso bhanyabhanya Ukutsala abasebenzisi abaphezulu benkonzo.
I-Apple TV + ayisiyo enye yeenkonzo ezinokukhalaza ngenani labasebenzisi. Nangona kunjalo, zonke izinto ezibengezelayo ayiyigolide, kuba ababhalisile inayo, uninzi aluhlawulwa. Basonwabela ixesha labo lasimahla lokuba inyani yokuba bathenge i-iPhone okanye ezinye izixhobo ezibandakanyiweyo ekukhuthazeni zabanika. Yiyo loo nto uhlala usenza izigqibo. ukuze ukwazi ukuphucula kunye nenkonzo yokunyusa.
Sisandula ukukuxelela ukutyikitywa kukaJessie Henderson, owayekade engusekela-mongameli olawulayo weefilimu zenkonzo yokusasaza iHBO Max. Uza kujoyina iqela le-Apple TV + elikhokelwa nguJamie Erlicht noZack Van Amburg, enika ingxelo kuMat Dentler. Oku kusayina kubaluleke kakhulu kwaye ngoku siyazi ukuba kutheni. Ngokwolwazi olutsha olukhutshwe kutshanje, iApple ifuna inkonzo yayo yokusasaza ukuba ilawule inani elikhulu le umxholo kwiifilimu ezibonakalayo ngonyaka. Yiloo nto iqhinga labo lokutsala abasebenzisi abahlawula ngakumbi isekwe.
Ngokutsho ingxelo entsha evela kuLwaziI-Apple sele inenani eliqingqiweyo leemovie ezikudidi oluphezulu, kubandakanya "iPalmer," "iCherry," kunye ne "Greyhound," kwaye uyibona njengendlela yokutsala abantu abaninzi kwiApple TV +. Kungenxa yoko le nto ebexelela abaphathi be studio ukuba injongo yakhe kukuba yenza ngaphezulu kwe-10 ukuya kwi-12 iifilimu zoqobo ngonyaka ngenkonzo yolonwabo. Oku kuyakuyivumela ukuba ikhuphisane ngcono nezinye iinkonzo zokusasaza ezinjengeNetflix, iHulu, iDisney +, kunye neHBO Max.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ababhalisi bafuna i-Apple TV +. Isicwangciso esitsha kukunyusa inani leefilimu